पार्टी विभाजन भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, भने, ‘प्रचण्डले आफ्नो भाग लिएर गए हुन्छ’ -
पार्टी विभाजन भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, भने, ‘प्रचण्डले आफ्नो भाग लिएर गए हुन्छ’
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०८, २०७७ समय: २३:३४:५२
प्रचण्डको कार्यकर्ता भइसकेपछि पूर्व एमालेको सम्पत्तिमा माधव नेपालले दाबी गर्न नमिल्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमा नेकपा विभाजन भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले एकीकरण सफल नभएको स्वीकार्दै भने, ‘प्रचण्डजी र मैले एकता गरेका थियौँ, दुई वटा पार्टी मिलाएर लैजाने भनेका थियौँ, प्रचण्डजी र म मिलेनौँ ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले आफूलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय चार्ली च्याप्लिनको जोक जस्तो भएको जिकिर गरे । बैंक्वेटमा भेला गरेर आफूलाई निकाल्दैमा जनताको मनबाट निकाल्न नसक्ने ओलीको भनाइ थियो । ‘तपाईंलाई हाँसो लाग्दैन ? प्रचण्डले मलाई यो पार्टीको सदस्यबाट निस्काशन गर्ने ? चार्ली च्याप्लिनको जोक भन्दा माथिल्लो हैसियतको लाग्दैन । प्रचण्डभन्दा कम्तिमा एक दशक अगाडि राजनीतिमा लागेका हुँ । एकदशक अगाडि पार्टी सदस्यता लिएको होला,’ ओलीले भने, ‘जसले पाहुनालाई बास बस्न दियो, उसले घरेवेटीलाई निकालेजस्तो भएन र ? ’
यस्तै ओलीले दलहरु भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लागिसकेको पनि बताएका छन् । उनले निर्वाचन कुन क्षेत्रमा कसलाई उठाउने र जनतालाई कसरी पक्षमा पार्ने भन्नेमा दलहरु भित्रभित्रै तयारीमा लागिसकेको उनेको दावी थियो । उनले काँग्रेसलाई निर्वाचन प्रतिक्षाको विषय भएको पनि बताए । ‘काँग्रेसलाई निर्वाचन प्रतिक्षाको विषय हो । नेकपा विभाजित जस्तो अवस्थामा छ । यो अवस्थामा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण काँग्रेसमा छ, ’ ओलीले भने । काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल आफै चुनाव हार्ने अवस्थामा रहेकाले मात्रै उनले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको उनले दावी गरे । उनले निर्वाचन आयोगसहितका सरोकारवाला निकायले आवश्यक तयारी थालिसकेको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दाको टुंगो लागेपछि थप स्पष्ट हुने बताए ।
यसैगरी ओलीले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट प्रदेश सरकार ढाल्न चलखेल भए थप कदम चाल्ने पनि स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । यथास्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै मिलेर जानु उचित हुनेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘नत्र उहाँले कदम चाल्नुभयो भने मैले पनि थप कदम चाल्नुपर्छ ।’